Tsy misy karantina ho an'ny Phuket manomboka ny 1 Jolay | Vaovao momba ny dia any Thailand
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Thailandy » Tsy misy karantina ho an'ny Phuket manomboka ny 1 Jolay
Ireo mpizaha tany te-hitsidika an'i Phuket, Thailand, izay vita vaksiny dia ho afaka hanao izany nefa tsy mila mandalo quarantine manomboka amin'ny 1 Jolay 2021.
Ny indostrian'ny Travel and fizahan-tany any Thailand dia nanohana ny governemanta izay vao nankato ny fanesorana ireo fepetra takina amin'ny quarantine ho an'ireo mpitsidika vita vaksiny tonga tany Phuket.
Phuket dia tsy nanana tranga COVID-19 vaovao nandritra ny 89 andro.
Raha tsy misy fiovana tsara eo amin'ny toekarena dia hidina ambanin'ny faritry ny fahantrana ny karaman'ny mponina.
Nandritra ny hetsika nandrasana indrindra taorian'ny lobbying mafy avy amin'ny indostrian'ny Travel and fizahan-tany any Thailandy, dia neken'ny governemanta ny fametahana ireo fepetra takiana amin'ny quarantine ho an'ireo mpitsidika vita vaksiny tonga tao Phuket tamin'ny 1 Jolay, ny fisokafana lehibe voalohany ho an'ny toerana fizahan-tany malaza.
Ny tontonana ara-toekarena notarihin'ny praiminisitra Prayut Chan-o-cha omaly dia nanaiky ny tolo-kevitry ny sehatra tsy miankina Phuket sy vondrona mpandraharaha hametraka 70% farafahakeliny ny mponina ao amin'ny nosy hisokatra indray ho an'ireo mpizahatany vita vaksiny, hoy ny minisitry ny fizahantany sy ny fanatanjahantena Phiphat Ratchakitprakarn.
Orinasa fizahantany sy zotram-piaramanidina Thai, miaraka amin'ny fanohanan'ny Filan-kevitry ny fizahan-tany any Thailand (tanj), ny Antenimieran'ny varotra Thai, ny Hotely momba ny hotely Thai (THA), ny fikambanan'ny mpiasan'ny dia lavitra (ATTA), ny SKAL THAILAND, ny PATA TH, ny Fikambanan'ny fitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA), fampielezan-kevitra #OpenThailandSafely, Fikambanan'ny Orinasam-pifandraisan'ny Airline (BAR), ary ny Association Airlines of Thailand (AAT), dia nidera ny governemanta tamin'ny fahombiazany nahitana ny aretin'ny COVID-19 tany Thailandy, na izany aza, naneho ny fanirian'izy ireo hamerina ny fizahantany ankehitriny avy any ampitan-dranomasina ho an'ireo mpandeha vita vaksiny.
Phuket dia tsy nanana vaovao Olona voan'ny covid-19 mandritra ny 89 andro. Ny manampahefana Phuket dia nanaiky ny drafitra hitsenana ireo mpitsidika tsy misy karokantine amin'ny 1 Jolay hanentanana ny toekarena ao an-toerana ary hanana doka vaksinin'ny COVID-19 tapitrisa mialoha izany. Ilaina maika ny mpizahatany vahiny any Phuket handrisika ny lafiny toekarena sy ny sehatry ny fizahantany. Talohan'izay dia nahazo vola sahabo ho 40,000 baht isam-bolana ny mponina iray teo an-toerana. Tamin'ny volana Febroary dia nilatsaka tamin'ny 8,000 baht izany. Raha tsy misy fiovana kely dia hianjera amin'ny 1,964 baht izany amin'ny volana jolay, izay ambanin'ny faritry ny fahantrana.
Ny fanadihadiana iray dia nanambara fa liana ny mitsidika an'i Phuket ny vahiny nefa tsy mila karokantine. Nilaza ny tompon'andraikitra ao an-toerana fa ireo vazaha mitsidika nefa tsy manaraka karokantine, dia ho voatsongo amin'ny alàlan'ny fampiharana finday COVID-19.
Nikasa ny hizaha ny drafitra fanokafana any Phuket ny governemanta alohan'ny toerana mafana hafa mpizahatany, toa an'i Koh Samui, hanampiana amin'ny famerenana indray ny indostrian'ny fizahan-tany voadona herintaona tsy nisy mpizahatany an-tapitrisany izay nandray anjara tamin'ny ampahadimin'ny toekarena talohan'ny areti-mandringana. Koh Samui, manaraka an'i Phuket, dia mangataka ihany koa ny fankatoavana hahafahan'ny mpandeha any ivelany mandingana ny fepetra takiana amin'ny quarantine. Ratchaporn Poolsawadee, filohan'ny Fikambanan'ny fizahan-tany any Koh Samui, dia nilaza fa manantena ny hahazo fankatoavana i Samui.
Ny fankatoavana an'i Phuket dia midika fa hisokatra telo volana mialoha ny sisa amin'ny firenena izy, izay antenaina hisokatra indray ho an'ireo izay vita vaksiny tanteraka amin'ny volana oktobra fotsiny.
Ireo mponin'i Phuket ihany koa dia hatao laharam-pahamehana amin'ny famoahana vaksinina, miaraka amin'ny doka maherin'ny 930,000 no andrasana alohan'ny hisokafana, hoy Andriamatoa Bhummikitti Ruktaengam, filohan'ny fikambanan'ny mpizahatany ao amin'ny nosy.